'हत्यारा हौं पक्राउ गरेर देखा' भन्दै प्रहरीलाई चुनौती दिएर भिडियो सार्वजनिक गर्ने ४ जना कर्याप्पै ! - Kantipath
‘हत्यारा हौं पक्राउ गरेर देखा’ भन्दै प्रहरीलाई चुनौती दिएर भिडियो सार्वजनिक गर्ने ४ जना कर्याप्पै !
कैलालीको जानकी गाउँपालिका–९ का २५ वर्षीय अरुण दासको हत्या प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले ४ जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय महानगरीय अपराध महाशाखा समेतबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरुलाई भारतबाट पक्राउ गरेको हो।
पक्राउ परेकाहरुलाई महाशाखाले काठमाडौंमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ। दास हत्या घटनाका मुख्य अभियुक्त प्रहरीलाई नै चुनौती दिँदै हिँडे पनि पक्राउ पर्न सकेका थिएनन्। कैलालीमा पुस पहिलो साता दासको घाँटी रेटेर टाउको छिनालेको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। अमरावती सामुदायिक जंगलमा नग्न अवस्थामा घाँटी रेटेको अवस्थामा दासको शव भेटिएको थियो।